Ihe ịchọ mma nkwakọ emepụta, Packaging ntecha, ịchọ mma tube emepụta - Reyoung
Anyị plastic akpa dịgasị si mgbanwe Pee tube, Laminate ABL tube, nozulu n'ọnụ tube, oval tube, super oval tube, ụlọ ọrụ tube ka egbugbere ọnụ gloss tube, lipstick tube, PBL tube, sugarcane tube, PCR tube, extruded tube na polyfoil tube.
Kalama na-afụ ụfụ
Anyị na-arụpụta ma na-enye karama plastik na mono-oyi akwa, okpukpu abụọ-nke ise oyi akwa EVOH; PITA, HDPE, LDPE, MDPE, PP, PETG na adụ aka ịfụ ụdị karama; ikike site na 5ml ruo 3L tumadi maka ntinye aka.
Cap & Ndị na-achọ ihe
Anyị na-enye okpu dị iche iche na ndị na-achọ ya, gụnyere okpu ntụgharị, mkpuchi nkpuchi, sprayer, mgbapụta mmiri na mgbapụta ụfụfụ; ighikota-apụ okpu, acryli okpu, mgbapu okpu, sịlịkọn ahịhịa ịhịa aka n'ahụ okpu na nozulu n'ọnụ n'elu okpu.
Banyere ngwaahịa a
Reyoung Corp. bụ ọkachamara na-emepụta ọkpọkọ plastik na karama PET / HEPE maka ọtụtụ ngwa gụnyere ịchọ mma, nlekọta onwe onye, ​​ịma mma, nri, ọgwụ na ụlọ ọrụ. Anyị nakweere teknụzụ ọhụrụ na PCR / Sugarcane / PLA nke na-eme ka ọ dị mma na ihe dị ndụ.
Efu Disinfectant ịkpali Plastic karama Fo ...
Freature Inogide disinfectant akpalite sprayer palstic karama. Ejiri karama nwere ihe na-ebute plastic, na-eguzogide ọgwụ corrosion / acid / alkali. Chemically anụ. Anyị ịgba karama nwere ike izute gị niile chọrọ. Professional ịgba imewe, nozulu na mgba ọkụ, ịgba osisi ike ga-gbanwee, mgba ọkụ imewe nwere ike igbochi mberede aka na-ezere-enweghị isi n'efu. Reyoungwildly disinfectant na-ebute karama plastik eji na nhicha na disinfection, maa ụlọikwuu, picnic, edozi isi, wate ...
Hot Sale Clear Plastic kalama With mgbapụta Dispenser
Njirimara Mere nke PETG plastic na ezi mma; karama dispenser karama bụ environmentally friendly recyclable. Enwere ike iji karama karama anyị na ncha, ncha efere, aka na-edozi ahụ, ude mmiri, ncha ntutu, gel ịsa ahụ, na-ehicha ihu. Product Paramenters Product Namelo PET karama na dispenser mgbapụta Mpịakọta 30ml, 60ml, 100ml, 120ml, 175ml, 200ml, 240ml, 250ml, 500ml (Customized) ...
Efu mposi Cleaner raygba Bottle na Sprayer ...
Njirimara: A na-eji ụdị karama emepụta ihe dị iche iche iji dabara aka, jiri mpi na-ebugharị ihe. Product Paramenters Product Name Factory Price N'ogbe Detergent karama, disinfectant ịgba karama Ihe Pee Plastic Volume 500ml / 600ml / 650ml (ngwaahia) Ọdịdị square Agba ahaziri Cap Ude Lotion mgbapụta, Disc Top, tụgharịa Top Cap, ịghasa okpu, Fine Mist na ndị ọzọ na mmiri Mkpa Ijikwa Hot St ...
Nkwalite Hot Ree afanyekwa Custom Mere Pee Soft ...
Njirimara Anyị squeze omenala mere Pee adụ tube na ọhụrụ nkwalite na-enye gị a adụ emetụ iji mmetụta. Mere nke ọma àgwà Pee, mgbochi ada ada, mara mma na siri, adabara dị iche iche n'oge. Product paramenter Item aha Custom Mere Pee Soft Touch tube Item no RYT016 Diamita 13mm-60mm （tubes gburugburu） 30mm-50mm (oval tubes) Capacity 5ml-400ml (0.27oz-13oz) Ogologo Gbanyere n'ime oke nke ikike tube (5ml ruo 400ml ) Layer Mono-oyi akwa f ...
Foldable Efu Printing pụrụ ịdabere Small Toothpas ...
Njirimara The efu ebi akwụkwọ obere plastic maka ntacha eze nkwupụta bụ pụta ìhè featuring foldable na a pụrụ ịdabere na. A pụrụ ịdabere na plastic tube a pụrụ ịdabere na ya na serums, creams, lotions, ihe nlekọta anụ ahụ, moisturizers na ndị ọzọ. Product paramenter Item aha Foldable Efu Printing Pụrụ ịdabere plastic tube Nke dịghị RYT013 dayameta 13mm-60mm （gburugburu akpa） 30mm-50mm (oval akpa) Ike 5ml-400ml (0.27oz-13oz) Ogologo Gbanyere n'ime nso nke tube ikike (5ml .. .
Efu PITA Plastic mgbapụta Bottle N'ihi Isi ịsa jel
Njirimara nke PET dị elu, whic na-anya isi amba ncha ịsa gel PET botte na-eji ogologo oge. Amber lotion PET kalama nwere ike inye nchekwa UV maka ngwaahịa nwere mmetụta dị ọkụ dịka mmanụ dị mkpa na aromatherapy. Ọ dị nnọọ mma maka ncha ntutu nke ụlọ, ude mmiri, ihe ndozi, ịsa ahụ, mmanụ ịhịa aka n'ahụ, ude mmiri. Ngwaahịa
E biri ebi Agba Omenala Plastic piakota nha nha ezé ...
Njirimara Anyị na-enye ọrụ nlekọta agba eji ede akwụkwọ maka plastik afanyekwa ntanetị soft soft. Afanyekwa tube dị mfe afanyekwa na iji na-enye gị a ka mma iji ahụmahụ. Reusable, inogide, adabara ude aka, ihe nhicha ihu. Na tụgharịa diski okpu, adụ tube dị mfe imeghe na nnọọ sealling anyị squeezeable tube bụ zuru okè n'ihi na ntacha eze nkwakọ ma ọ bụ ndị ọzọ na ịchọ mma na ngwaahịa. Product Paramenter dayameta 13mm-60mm （gburugburu akpa） 30mm-50mm (oval akpa) Capa ...